Maqaal: Xasuuqa Ogaadeenya Xornimaa Lagaga Bogsan Karaa. | ogaden24
Maqaal: Xasuuqa Ogaadeenya Xornimaa Lagaga Bogsan Karaa.
Qormadani waa qormo-xusuuseed aan ka soo min-guuriyay kaydka faraha badan ee ku xafidan maskaxdayda, oo laga dhex-heli karo dhacdooyin kala duwan oo dareenno kala duwan xanbaarsan. Kuwo farxad xambaarsan, kuwo murugo huwan, kuwo xanuun wata, kuwo caafimaad leh, kuwo naxdin horseeda iyo kuwo naruuro ku bishaareeya. Waa sunnada nolosha, waana mid ku salaysan hadal-murtiyeedkii Soomaaliyeed ee ahaa “Waagii baryaaba waayihiisuu leeyahay”.
Dhacdada aan maanta sida gaarka ah u xusayo waxay tahay mid aniga iyo inta dareen ila wadaagtaba ay si wayn u xusuusan yihiin, noloshooda inta ka sii hadhayna u xusuusan doonaan. Waa xasuuqii ka dhacay magaalada Qabridaharre, maalintii talaadada ahayd ee taariikhdu ku beegnayd 15 November 2005. Maalintaas waxay ciidammada Wayaanuhu magaalada Qabridaharre ku gumaadeen dhalinyaro ay tiradoodu gaadhaysay soddomeeyo, oo u badnaa maxaabiis ku jiray xabsi ku yaalla magaalada Qabridaharre. Wuxuu ahaa xasuuq bahalnimo ah oo ciidammada Wayaanuhu ay kaga aar-goosanayeen dagaalladii ay CWXO ku naafeeyeen ee ka socday dalka Ogaadeenya.
Sannad-guuradii ugu horraysay ee xasuuqaas ka soo wareegtay, oo ku aaddanayd 15 November 2006, waxaan qoray qormo si wayn u caan baxday oon ugu magac-daray “Xasuuqa Qabridaharre waa xisaab cadowga ku maqan”, taasoo aan ka sameeyay barnaamij marar badan oo xilligaas ka dambeeyay laga sii daayay warbaahinta halganka.
Maanta waxaa xasuuqaas ka soo wareegay 11 sannadood. Muddadaas gudaheeda waxaa dalka Ogaadeenya ka dhacay xasuuqyo badan oo ciidammada Wayaanuhu ay ka gaysteen, walina xasuuqaasi wuu socdaa, lamana filayo inuu joogsado inta laga xoraynayo dalka Ogaadeenya, sidaas darteed baan qormadan ugu bixiyay magaca kor ku xusan ee ah “Xasuuqa Ogaadeenya xornimaa lagaga bogsoon karaa”.
Sida kaliya ee lagu soo afjari karo xasuuqa iyo dhibaatooyinka kalee gumaysigu ku hayo dadwaynaha Soomaalida Ogaaadeenya, waxay weeye iyadoo dalka laga xoreeyo. Ma jirto fursad kaloo ay dadkaasi haystaan. Xornimadana waxaa lagu hanan karaa oo kaliya in loo dagaallamo oo naf iyo maalba loo huro.
Waxaan jeclahay inaan wada-xusuusanno hadalkii murtida xambaarsanaayee uu inooga tagay Alla ha u naxariistee Abwaan C/llaahi Macalin Axmed Dhoodaan, mar uu ka hadlayay dhibaatooyinka halganka lagala kulmo, wuxuuna yidhi “….Qofkii hoyasho guri doonayow, waa cidla u hadaafee. Kii hadimo diidaayow, waa naftaa huridee.”
Ummad halgan gobannimo doon ah isu-taagtay, inay dhibaato la kulmi waa hubanti, hase yeeshee waxaa sidoo kale hubanti ah in cadowga ay la dagaallamayso uu isaguna dhibaato middaas ka sii wayn la kulmayo. Waxaan sidoo kale jeclahay inaad ila wada-xusuusataan hadal-murtiyeedkii caanka ahaayee uu ka tagay halyaygii reer Koonfur Afrika Nelson Mandela. Hadal-murtiyeedkaasi wuxuu ahaa:
“Meelna kama jirto xornimo dhib yaraan lagu helo, qaar badan oo inaga mid ahna waxay ku qasban yihiin inay marar badan dhimashada u badheedhaan, ka hor inta aynaan gaadhin himilada ugu sarraysa een higsanayno.”
Haddaan dib ugu noqdo qormadii aan 11 sano ka hor ka qoray xasuuqa Qabridaharre een maanta xusayno, waxaan cinwaan uga dhigay “Xasuuqa Qabridaharre waa xisaab cadowga ku maqan!!” Haddaba waxaa hubaal ah inuu akhristuhu iga filayo inaan ka jawaabo su’aasha is-bilaysa ee ah “Xisaabihii cadowga kaagaga maqnaa ee xasuuqu ugu horreeyay, wax ma ka soo gudatay? Waa su’aal meesha ku jirta oo la is-waydiin karo.
Inta aynaan “haa iyo maya” midna dhihin waxaan jeclahay inaan wax yar ka ifiyo wadciga uu gumaysiga Itoobiya xilligaas ku sugnaa iyo wadciga uu hadda ku sugan yahay iyo xidhiidhka ay arrintaasi la leedahay halganka Ogaadeenya.
W/Q: Axmad Yaasiin Cabdi